Muuri News Network » Xildhibaan Xuseen Cali Macalin oo si adag ugu jawaabay Xildhibaan Nadiir una shegay Suldaankiisa saxda ah
Xildhibaan Xuseen Cali Macalin oo si adag ugu jawaabay Xildhibaan Nadiir una shegay Suldaankiisa saxda ah
Jul 14, 2016 - 1 Jawaab
Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka dowlad goboleedka K/Galbeed Soomaaliya ayaa sikulul uga jawaabay hadal dhawaan ka soo yeeray xildhibaankale oo asna ka tirsan isla Baarlamaanka koonfurgalbeed.
Xildhibaan Xuseen Cali Macalin ayaa si kulul ugu jawaabay hadal dhawaan kasoo yeeray Xildhibaan Nadiir, kaasoo ahaa diidmada iyo inkiraadda ku aaday Suldaankii ka dhigay Xildhibaan koonfurgalbeed Soomaaliya.
Xildhibaan Nadiir ayaa loo soo xulay in uu ka mid noqdo Xildhibaanada koonfurgalbeed Soomaaliya, waxaana soo xulay oo saxiixay Suldaanka Beesha Biimaal Suldaan Ibraahim Suldaan Cali Suldaan Cabdi.
Xildhibaan Xuseen Cali Macalin ayaa ku tilnaamay Xildhibaan Nadiir in uu caasiyoobay isla markaana uu faragashtay dhaqankii saxda ahaa ee uu aqoonsanaa markuu Xildhibaanimada rabay; balse waxaa usheegay in Xildhibaan Nadiir uu danta guud ka fiirsaday danta gaar.
Xildhibaan Nadiir ayaa idaacadaha ka sheegay in Suldaan Ibraahim Suldaan Cali uusan ahayn Suldaanka Beesha Biimaal iyadoo la ogyahay dadaalka uu u galay Suldaan Ibraahim in uu soo dhiciyo xaqii beesha Biimaal ee koonfulrgalbeed.
Balse waxa uu u muuqdaa in la iibsaday islamarkaana ka doorbiday lacag in uu inkiro suldaankiisa saxda ah ee usoo doortay in uu Beesha Biimaal ku matalo Xildhibaanada koonfurgalbeed.
One Response to Xildhibaan Xuseen Cali Macalin oo si adag ugu jawaabay Xildhibaan Nadiir una shegay Suldaankiisa saxda ah
WIL XINITIER says:
13/07 at 9:35 pm
MOYANYAHOW HAISKU DIRIN BEESHA XAYAWAANBA TAHAYE, WAXAN LAHADLAYA TIFATIRAHA MUURI NWES , MAGARANEEYNO CIDA WAX KU SHEEGTO , KOLEY MOORYAN QARSAN BATAHAYE.